ပြန်လည်နုပျိုသောရေယာဉ်ဖြင့်အဆင်ပြေစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး! .. Burulaş 12 မီတာ 25 သည်ဘတ်စ်ကားအသစ်ကိုဝယ်သည်။ RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursaအငယ်နှင့်အတူအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်! .. Burulaş 12 25 မီတာနယူးဘတ်စ်ကားလက်ခံတွေ့ဆုံ
06 / 09 / 2019 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
ဒီနှစ် 26 50 12 မီတာအသစ်ကဘတ်စ်ကားထည့်သွင်းထားပါတယ်တဲ့ microbus နှင့်ဘတ်စ်ကားယာဉ်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းကြောင်း Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Burulaş 25 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ။
Bursa ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ကအစဉ်မပြတ်အသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့စင်းကိုအာဏာ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တိုးတက်အောင်အလေးပေးအရည်အသွေးကိုတိုးချဲ့အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပြင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်လမ်းဆုံအစီအစဉ်နှင့်ဖဲကြိုးသယ်ယူပို့ဆောင်အစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်ရန်အရေးပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏နယ်ပယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးစဉ်းစားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်ကျေးမှု၏ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည် microbus နှင့် 26 နှင့်ယခုမသန်စွမ်းပြည်သူများနှင့်များအတွက်လက်လှမ်းလေအေးပေးစက်ဘတ်စ်ကားထို့နောက် 50 ပေါင်းစည်းစနစ် 12 မီတာ 25 အသစ်ကဘတ်စ်ကားဖွဲ့စည်းပုံမှာကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ အသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များ၏ရေယာဉ်စု join ကြောင့် Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas ကျင်းပခဲ့သောအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားBurulaşလက်ခံရရှိအသစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူရေတပ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်၏နံပါတ် 424 ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပြ။
အခြားတစ်ဖက်ချဲ့ထွင်တလက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွင်, အသစ်ဝယ်ယူ 25 50 ကလူကိုလည်းမြို့တော်ဝန်အလုပ်အကိုင် Aktas ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖော်ပြထားလက်ခံရရှိနှင့်အတူမောင်း, "ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်အွန် home're ၏လူများ၏အရေးကိစ္စများတွင်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ 60 ရာခိုင်နှုန်း Bursaray စွမ်းရည် optimization အလုပ်အချက်ပြတိုးမြှင့်ဖို့အလျင်အမြန်နေဆဲဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်နောက်နှစ်ကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်တိုးအောင်မြင်ပါပြီလိမ့်မယ်။ မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်; ကျောင်းဖွင့်ပွဲမတိုင်မီအနိမ့်အထပ်ကျနော်တို့လေအေးပေးစက်နှင့်မသန်မစွမ်းချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Burulaşကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားယာဉ်၏ 25 တစ်ခုပေါင်းထည့်ရန်ရှိသည်။ အသစ်ဘတ်စ်ကား၌အကြှနျုပျတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နေ့တာ၏နံပါတ်တိုးလာကြပါပြီမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Bursa စီးတီးဆေးရုံနှင့်သိပ်သည်းဆအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပေးသွားမှာပါသောလိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်းကိုမှဖြည့်စွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကား 25 12 အတွက်မော်တော်ယာဉ်၏ 399 424 မီတာစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ငါတို့အဆှအနားမှာကားမောင်းသူ 50 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Bursa ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မတရားဖမ်းဆီးBursalılarကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူအသက်ရှင်စေမည်။ Bursalılarıအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်ကျေးမှုalıştırıpကျနော်တို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှီခိုလုပ်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါမိန့်ခွန်းအပြီးအသစ်ကတူရိယာတစျဦး၏ဘီးကတဆင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas, မိမိကိုမိမိမှာလူကူးဧရိယာ၌ပထမဦးဆုံးကားမောင်း။
ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ Temsa စီးပွားရေးစက်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
သင်္ဘော Aziz က Sancar, ရေယာဉ်စုအပြီးအစီးဆိုက်ရောက်
Burulaş'l, Bursa Sabiha Gokcen လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်
တစ်ဦးပထမဦးဆုံး '' သောင့်သက်သာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် '၌ Kocaeli' '
နယူးတံတားဖွင့်လှစ်နေ့ Arifiye 65 မီတာရေတွက်နေသည်
Burulaş 45 သည်Türk Metal နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်Burulaşကနေ New ကိုမီထရိုလိုင်းစစ်ကူ ''
နယူးဘတ်စ်ကား 25 Burulaşလက်ခံတွေ့ဆုံ